काभ्रेको नमोबुद्धमा एक दम्पतीको हत्या, ५ जना प्रहरी नियन्त्रणमा – Radio Roshi
काभ्रेको नमोबुद्धमा एक दम्पतीको हत्या, ५ जना प्रहरी नियन्त्रणमा
in रोशी खबर — by Roshikhabar —	November 5, 2019
नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ तल्लो हटियामा एक दम्पतीको घरभित्र विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको अवस्थामा लास भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी प्रमुख (एसपी) जयराज सापकोटाले नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ८ तल्लो हटियाका ५५ बर्षीय श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र उनकी श्रीमती अन्दाजी ५० बर्षीय रुकुमाया श्रेष्ठको हत्या गरेको अवस्थामा घरभित्र शव फेला परेको जानकारी दिए । घट्नास्थाल पुगेर आएका एसपी सापकोटाले आर्थिक कारण हत्या भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको बताए ।
हिजो राती भएको घटना आज विहान थाहा पाएपछि प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर लगेर अनुसन्धान गरेको जनाएको छ । घट्नामा संलग्न रहेको आशंकामा ५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
घरमा नै चिया पसल सञ्चालन गर्दै आएका दम्पतीले मदिरा समेत बिक्रि गर्दै आएका पाईएकोे छ । घटना बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी प्रमुख सापकोटाले जानकारी दिए ।